Vaovao - Fa maninona no be dia be ny toerana ampiasaina amin'ny fanontana sy famarotana album?
Miova miadana tsikelikely ny tanàna tsirairay, ary ny fiovana ao an-tanàna dia avy ihany koa amin'ny fitodiavam-bola isan-karazany, ary koa avy amin'ny orinasa samihafa ho fampandrosoana ara-toekarena, ary maro ireo orinasa lehibe te-hahavita ny orinasany manokana Na dia tsara kokoa aza, mba ho afaka hisarika ny mpanjifa betsaka kokoa, mazava ho azy, izy ireo koa dia hisafidy fomba hafa hampiroboroboana ny vokatra vokariny, izay hanana ny fizotran'ny doka ihany koa.
Ny fanontana katalaogim-bokatra dia amidy amina toerana maro, ohatra, ny ankamaroan'ny toerana amidy amin'ny tanàn-dehibe, ary ankehitriny ny faritra ambanivohitra maro no velomina tsikelikely, ary ny faritra ambanivohitra maro dia hanana tanjaka fihinanana sasany.
Noho izany, ny fanontana katalaogam-bokatra dia amidy amina toerana maro, ary velomina tsikelikely, ary azo ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny faritra amin'ny firenena. Noho izany dia tsy sarotra ny mahita fa ny tsena toy izany dia mbola somary lehibe ihany, satria somary lehibe ny filan'ny tsena. Lehibe, noho izany ho an'ny orinasa fanontam-pirinty lehibe Nanjing, tsy afaka mamaly fitakiana bebe kokoa eny an-tsena izy ireo raha manohy mampitombo ny vokatra.
Ny orinasa tsirairay dia manana fomba sy filozofia samihafa. Raha te hampandeha tsara ny vokatra vokariny izy ireo, mazava ho azy, dia hisafidy fomba maro hafa hampahafantaran'ny olona bebe kokoa ny fisiany. Mba hahafahan'ny olona maro mahita fanjifana be amin'ny fiainany.